Imidanso yaseMpumalanga ngexesha lethu idume kakhulu. Ezi midaniso zihlala kwindawo yokuqala kwindawo yobuhle kunye nobufazi. Azintle nje zihle kwaye zi luncedo kubasetyhini, kodwa kwakhona yinkqubo yokuphucula impilo yowesifazane. Khawuqwalasele oko kukusetyenziswa kwemidanso yaseMpumalanga.
Iyintoni inzuzo kumfazi ozisa imibhobho esempuma
Ukusetyenziswa okuvela kulolu hlobo lwezobugcisa zaseMpumalanga kubanzi kakhulu. Iiklasi eziqhelekileyo zolu hlobo lobugcisa zenza zonke izihlunu, ezithatha inxaxheba kwinkqubo yokuzalwa, ezinqabileyo kunye ezinamandla. Ukongezelela, ngoncedo lokudansa ngesisu, unganciphisa ama-spasms ayenzeka ngexesha lomjikelezo wesini. Umdaniso waseMpumalanga ubonakaliswe ngumsebenzi onjengokugubha izikhwebu. Lo msebenzi unceda ukwandisa ukujikeleza kwegazi kwindawo ye-pelvic. Oku kunenzuzo engapheliyo ekubuyiseleni umsebenzi wamaqanda, kunye ne-uterus ye-mucous. Ukunyakaza okunyameko kunye nokunyanzeliswa kwezibilini ngexesha lodaniso lomdaniso lwangaphakathi lomzimba wesifazane. Ukudansa kwaseMpumalanga kukunceda kakhulu umzimba wesetyhini.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwimidaniso yase-oriental kumalungu, kunye nangokunceda ekusebenziseni i-posture, u-elasticity of disc intervertebral iphucula. Ekusebenzeni lolu hlobo lobugcisa ubunzima buncipha, iinqabana ziyaqina, isisu somelele. Ngeenkalo zokudansa eziqhelekileyo, abafazi abanesifo sesifo samathambo bayazibala ngokupheleleyo iintlungu. Ngoncedo lweendlela ezahlukeneyo zokuzivocavoca, iisiphako zangasemva zoluliwe, ukukhathala nokuxhatshazwa kususwa. I-thorax, iintlungu ezisentloko ezibangelwa iziqeshana entanyeni ziyancipha kancane.
Ukudansa uBelly, okwenene, kwandisa ubulili kwanoma yimuphi umfazi. Umfazi uqala ukuthanda nokuziva umzimba wakhe, ochaphazela ngokuqinisekileyo ubomi bakhe bomntu. Kwakhona, iinzuzo zokudanisa zivakalelwa kuwo wonke umzimba. Ngethuba le midaniso, imisipha yazo zonke izitho zibandakanyeka. Oku kuphucula ukusebenza kwamathumbu, isimiso senhliziyo, ubuchopho, ulusu luba lukhulu ngakumbi, inkqubo yokuphefumula iyaqhelekanga. Ukongezelela, i-gait ilula, imisebenzi yazo zonke iinkqubo iyakhuliswa.
Ziziphi ezinye iingeniso ezidalwa yimidanso yasempuma?
Xa wenza ukunyakaza kumdaniso waseMpumalanga, izihlunu zezandla kunye nebhinqa legxala libandakanyeke. Ndiyabulela kule nto, ithoni ye-intercostal musculature yanda, eyenza inkampani yebhinqa iqine kwaye iqine.
Ukudibanisa kwezinto ezithile zomdaniso waseMpumalanga (ukugubha, ukubetha, iplastiki) kwiimisipha zesisu zisinika ukuguquguquka nokuhamba. Ikhumba kwindawo yesisu iyanqatshelwe i-cellulite interlayer kunye ne-flabbiness, ithola ukunyaniseka. Umntu wesibini uhamba ngokuthe ngcembe uvumelaniswe, ufumana i-curves elula kunye neenkcazo.
Iiklasi ezineendlela ezisemaphandleni zokudansa zivulela ithuba lokunciphisa uxinzelelo. Bakhululeka ngokupheleleyo umzimba wonke, banciphise ingcinezelo yengqondo emva komsebenzi womhla. Olu hlobo lobugcisa lunokuthelekiswa nokucamngca. Ukugxotha kumdaniso, uhlala ucingisise kwaye uphazamiseka kwiingxaki. Imidanso yasempuma ikhulula ingqondo. Umntu uya kuba nobunzulu kunye nomoya. Ukudansa kwesisu ngokuzimela, ukusebenzisa intuition kunye nomculo kunceda ukususa umqobo phakathi komzimba kunye nengqondo. Umntu uba ngumculi wenene, okwandisa ukuzithemba kwakhe. Iimeko ezinjalo emva kweeklasi ziyaqhubeka ixesha elide. Ukuzithemba kukunceda umfazi ukuba avule kwezinye iindawo ezahlukeneyo zomsebenzi.
Ukuphefumula okupheleleyo kunye nesigqirha ngexesha leeklasi kunye nemidanso yaseMpumalanga ichaphazela kakuhle amaziko anenjongo yokuzonwabisa. Oku kubonakaliswe kwiimeko zemoya kunye nemeko yempilo ngenxa yokukhululwa kwe-endorphins, iimoya ikhula.
Izibonelelo zokuqhuba loo midaniso ziphezulu kakhulu. Kancinci, ibhinqa isetyenziswe kubo kangangokuthi akakwazi ukuyenza ngaphandle kwesinye isabelo sengqondo ezilungileyo. Kodwa kufuneka ukwazi ukuba ngaphambi kokuba uqale, kufuneka udibane nomfundisi kunye nodokotela. Ukususela kwimidanso yaseMpumalanga nayo inokuchasene.
Ukucoca indlu ngeFeng Shui
Ipeyinti kwisalathisi: i-batik, iteknoloji
Iingubo eziphezulu ze-4 eziphezulu zebusika 2016-2017
Ulwaphulo lwe-ozone: ingozi okanye inzuzo
I-oatmeal pancake nge-apula
Ziziphi iintlobo zezinwele abesilisa abazijonga ngayo
Biography uJean Paul Belmondo
Indlela yokukholisa indoda yakhe ukuba ikhulelwe
Ngaba kulula ukufundisa umntwana indlela yokuziphatha kakuhle kwisitalato?